सबैभन्दा आरामदायक ओछ्यान पानाहरू के हो?
स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » गेस्टपोस्ट » सबैभन्दा आरामदायक ओछ्यान पानाहरू के हो?
प्रिमियम बेडसिटले तपाईंको निद्रामा सुधार ल्याउन सक्छ, जबकि सब-पारले सुत्ने समयको आनन्द तुरुन्तै नष्ट गर्छ। रफ र ओछ्यानहरू असहज छन्। उपयुक्तहरू लामो समयसम्म टिक्ने, नरम, हाइपोएलर्जेनिक र चाउरी पर्न प्रतिरोधी हुनुपर्छ। नियमित रूपमा सामान्य किन्न भन्दा उचित सामग्रीबाट बनेको उच्च गुणस्तरको बेडिङमा एक पटक लगानी गर्नु उचित हुन्छ।
हामी के सामग्री प्रयोग गर्छौं?
गुणस्तरको ओछ्यानका लागि कुन सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ? तिनीहरू प्राकृतिक, टिकाऊ र स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित हुनुपर्छ। लिनेन र हच प्रयोग:
अविश्वसनीय नरम र लामो समय सम्म चल्ने माइक्रोफाइबर;
विलासी चिल्लो बाँस कपडा;
100% प्राकृतिक कपास।
microfiber लक्जरी पानाहरू सेट विभिन्न एलर्जीबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि राम्रो छ र चिसो मौसममा पनि राम्रो छ किनभने तिनीहरू राम्रोसँग न्यानो हुन्छन् र राम्रो हावा परिसंचरण प्रदान गर्छन्। यो सामाग्री चक्की, पफ को गठन को लागी प्रतिरोधी छ, झुर्री गर्दैन, र लामो समय को लागी राम्रो उपस्थिति कायम राख्छ। बाँसको ओछ्यान पातलो हुन्छ, रेशम जस्तै चिल्लो हुन्छ, ओसिलो राम्रोसँग सोस्छ, सास फेर्न मिल्छ र राम्रो देखिन्छ। यस सामग्रीबाट बनेको ओछ्यानका पानाहरू बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छन्। कपास पानाहरू दैनिक प्रयोगको लागि उत्कृष्ट छन्, छाला-अनुकूल, र टिकाऊ।
फ्लानेल ओछ्यान पानाहरू
ओछ्यानका पानाहरूका लागि फ्ल्यानेल सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्रीहरू मध्ये एक हो। को फाइदाहरू फ्लानेल पानाहरू:
प्राकृतिक सामग्रीबाट बनेको;
hypoallergenic, धुलो जम्मा गर्दैन, र एलर्जी प्रतिक्रियाहरू कारण गर्दैन;
नमी र पसिना राम्रो अवशोषित;
पहिरन प्रतिरोधी र उचित हेरचाह संग धेरै वर्ष को लागी रहनेछ;
सफा गर्न सजिलो;
छालाको लागि आरामदायक र सुखद।
यद्यपि, फ्लानेलका केही बेफाइदाहरू छन्। कपडाको संकुचन र विकृतिबाट बच्नको लागि यसलाई कम तापक्रममा धुनुपर्छ। फ्लानेल लामो समयको लागि सुक्छ। नुहाइसकेपछि यो त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन, तर पानाहरू सुक्खा नभएसम्म ओछ्यानलाई खुला नगरी छोड्नु राम्रो हुन्छ। मेसिन धुनु अघि फ्ल्यानेल ओछ्यान पानाहरूमा दाग हटाउनुहोस्; अन्यथा, तिनीहरू सधैंभरि रहन सक्छन्।
ओछ्यान हेरचाहको लागि सामान्य सिफारिसहरू
तपाईंले सधैं आफ्नो ओछ्यानका पानाहरूलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्नु अघि धुनुपर्छ; यसले सफा गर्नेछ, रंग ठीक गर्नेछ, र कपडालाई नरम पार्नेछ। धुलोको कुनाहरू सफा गर्न ड्युभेट कभरहरू र तकियाहरू भित्र बाहिर घुमाउनुहोस्। पानालाई ड्युभेट कभर भित्र राख्नुहोस् र जिपर वा बटनहरू बन्द गर्नुहोस्। रंगीन पानाहरू सेतोबाट अलग धुनुहोस्। धुने तापमान जाँच गर्नुहोस्। यी सरल नियमहरूले तपाईंलाई आफ्नो ओछ्यानको जीवन विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ। लिनन्स र हचले तपाईंलाई नरम र आरामदायक ओछ्यानमा रमाइलो सपनाहरू देख्न चाहन्छन्।
थप मा: बांस
तनावमुक्त छुट्टीको लागि तयारी गर्न सुझावहरू
पार्किन्सन रोगको लागि नयाँ औषधि पेटेन्ट
Wendy को $5Biggie Bag थप विकल्पहरू सहित
गैर-कृषि स्मार्ट सिंचाई नियन्त्रक बजार...
माइग्रेनको लागि क्षितिजमा नयाँ उपचार
लुपस भएका मानिसहरूको कम्तिमा एउटा प्रमुख अंग हुन्छ...
ग्लोबल होटल एलायन्सले नयाँ सदस्य घोषणा गरेको छ
दोस्रो चरणमा उपचार गरिएको पहिलो बिरामी धेरैमा अध्ययन...
पहिलो एयरबस A321neo एयरस्पेस भित्री डेलिभर भयो ...
Waikiki मा आगन्तुकहरूको लागि तत्काल रोग चेतावनी...